Farsamada – HIQ
Waaxda injineernimada ayaa ah mas’uulka farsamada iyo injineernimada. masuuliyadaha ugu weyn ee ay ka mid yihiin:
Waaxdu waxay maamushaa ilaha warbaahinta qaranka ee yar yar. Waxay mas’uul ka tahay qorsheynta, qoondeynta, meeleynta iyo ruqsad siinta idaacadaha si loo xaqiijiyo bixinta adeegyada wax ku oolka sida mobile, xaddiga dayax-gacmeedka, qalabyada gaaban iyo weliba warbaahinta, sidoo kae waxay ku hayaan Miisaanka Isbed Isbeddelka Qaranka (NFAT). Waxaa intaa dheer, waaxdu waxay si joogto ah u qabataa hawlaha kormeerka.
Waaxdu waxay maamushaa khayraadka lambarada qaranka iyo habka qoondayntooda.Waxay kobcinaysaa qorshaha Lambarka Qaranka, kaas oo bixiya xeerar iyo tilmaamo loogu talagalay isticmaalka iyo meelaynta lambarrada iyo xeerarka adeeg Bixiyeyaasha isgaarsiinta.
Nooca Ogolaanshaha/Type Approval
Waaxdu waxay mas’uul ka tahay horumarinta iyo hirgelinta nooca ogolaansho ee qalabka isgaarsiinta. Nidaamyada nooca ogolaashaha waxaa ku jira shuruudaha ugu yar ee jaangooynta , farsamada iyo badqabka ee qalabka isgaarsiinta elektarooniga ah ka hor inta aan la isticmaalin ama lagu iibinin Somaliya
Waaxdu waxay masuul ka tahay horumarinta qeybta isgaadhsiinta. Iyo kooxda Kajawaabidda Xaaladda Deg degga ah ee computreada (CERT).